Akụkọ - Snapped Filament
Ndị nbipute 3D FDM/FFF
Ndị na-ebi akwụkwọ 3D resin
Ihe eji ebi akwụkwọ 3D
Ụlọ ọrụ Okike
Amụma ọrịre ahịa gachara
Blog>Filamentị gbawara agbawa
Filamentị gbawara agbawa
Kedu ihe bụ nsogbu?
Snapping nwere ike ime na mmalite nke mbipụta ma ọ bụ n'etiti.Ọ ga-eme ka nkwụsị mbipụta, ibipụta ihe ọ bụla n'etiti mbipụta ma ọ bụ okwu ndị ọzọ.
∙ Ihe mkpuchi ochie ma ọ bụ dị ọnụ ala
∙ Extruder Esemokwu
Ndụmọdụ nchọpụta nsogbu
Filament ochie ma ọ bụ dị ọnụ ala
N'ikwu okwu n'ozuzu, filaments na-adịru ogologo oge.Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-edobe ha n'ọnọdụ na-ezighị ezi dị ka ìhè anyanwụ kpọmkwem, mgbe ahụ, ha nwere ike ịghọ ihe mgbawa.Filamenti dị ọnụ ala nwere ịdị ọcha dị ala ma ọ bụ ihe eji emegharị ihe, nke mere na ọ dị mfe ijide ha.Ihe ọzọ dị mkpa bụ enweghị nkwekọrịta nke dayameta filament.
Ozugbo ị chọpụtara na eriri ahụ na-agbaji, ịkwesịrị ikpo ọkụ ma wepụ filament ahụ, ka i wee nwee ike refeed ọzọ.Ị ga-achọ iwepụ tube nri nke ọma ma ọ bụrụ na filament ahụ abanye n'ime tube ahụ.
Gbalịa mee ihe ọzọ
Ọ bụrụ na snapping ahụ emee ọzọ, jiri filament ọzọ chọpụta ma filament a na-agbaji agbagoro agbago ma ọ bụ dị ọnụ ala nke a ga-atụfu.
Esemokwu nke Extruder
N'ozuzu, enwere esemokwu na extruder nke na-enye nrụgide na-eri nri filament.Ọ bụrụ na nrụgide ahụ siri ike, mgbe ahụ, ụfọdụ filament nwere ike ịdaba n'okpuru nrụgide ahụ.Ọ bụrụ na filament ọhụrụ ahụ na-agbanye, ọ dị mkpa iji lelee nrụgide nke tensioner.
KWESỊRỊ ỌRỤ ỤWA
Tọpụtụ ihe na-akpata nrụgide ntakịrị ma jide n'aka na ọ dịghị ihe na-amị amị nke filament mgbe ị na-eri nri.
Nozzle mechiri emechi nwere ike iduga na filament a kpụrụ akpụ, ọkachasị filament ochie ma ọ bụ dị ọnụ ala nke na-akụkpọ nkụ.Lelee ma ọ bụrụ na emebiwo nozzles ma nye ya nke ọma dị ọcha.
Gaa naNozzle gbajiringalaba maka nkọwa ndị ọzọ maka idozi nsogbu a.
Lelee okpomoku na ọsọ ọsọ
Lelee nke ahụ ma ọ bụrụ na nozzles na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke ọma.Leleekwa na ọnụọgụ nke filament dị na 100% ma ọ bụghị elu.
Oge nzipu: Dec-17-2020
201, Block 7, HangchengZhigu • Ọdịnihu Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, PRChina 518126
© Nwebiisinka 2022: Ikike niile echekwabara.Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co. Ltd. Featured Products Sitemap Uk 3d Printer Filament PLA filament Cylinder Laser Engraving Machine Filamente Pla Aquarium Safe 3d Printer Filament Pla Filament 1.75 Mm All Products>